War Deg Degah: Inaa Lilaahi Wa Inaa Ilaahi Raajicuun, Waxaa Baxay Nin Qaali ah, Cabdullahi Macalin Axmed Dhoodaan – Rasaasa News
Geeridu waa xaq, kuli nooluhuna waxay ku dambayn dhimasho. Waxaa xalay ku geeriyooday magaalada Harar Eebe Wayne ha u naxariistee Cabb-qari Cabdullahi Macalin Axmed Cismaan [Dhoodaan]. Cabdullahi Macalin Axmed Dhoodaan, waxaa uu ahaa nin aad ay u taqaan ummada Somalidu meel ay joogtaba, waxaana uu ahaa Aabaha murtida Somalida.
Abdullahi Macalin Dhoodaan waxaa uu deganaa magaalada Jijiga, xanuun qabtay dartiis ayaa loo geeyey magaalada Harar maalin dhawayd, halkaas oo uu ku xijaabtay Cabdullahi Macalin Dhoodaan xalay.
Sida aan ka soo xiganay telefiishinka ESTV, Dawlada degaankla Somalida ayaa u saartay gudi farsamo aaska Marxuun Cabdullahi Macalin Axmed Dhoodaan. Marxuun Cabdullahi Macalin Dhoodaan ayaa lagu Xabaali doonaa Jijiga Maalinta Axada April 28, 2013.
Maamulka Rasaasa News iyo shaqaaalaheedu, waxay tacsi u dirayaan dhamaan; dawlada degaanka, dadweynaha iyo gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Cabqari Cabdullahi Macalin Axmed Dhoodaan, Marxuunka waxaan Eebe Wayne uga baryeynaa in uu Janadii geeyo Aamiin.